प्रकाशित : बिहिबार, फागुन २३, २०७५१३:०६ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
काठमाडौँ- निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा नक्कली अभियुक्त खडा गर्दै यातना दिएको आरोपामा र हत्या प्रकरणमा प्रमाण नस्ट गरेको भनी तत्कालीनकञ्चनपुर प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) डिल्लीराज विष्टसहित ८ प्रहरीविरुद्ध जिल्ला अदालतमा अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।।
मुद्दा दायर भएकाहरु विरुद्ध प्रहरीमा छुट्टा-छुट्टै जाहेरी परेको थियो। सोहि जाहेरीको आधारमा ८ प्रहरीविरुद्ध जिल्ला अदालतमा अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो।
निर्मलाकी आमा र दिलिपसिंह विष्टका दाजु खड्ग विष्टले प्रहरीमा छुट्टा-छुट्टै जाहेरी दिएका थिए। घटनाको अनुसन्दान्को क्रममा प्रहरीले लापरवाही र प्रमाण समेत नस्ट गरेको विभिन्न छानबिन समितिहरुले यसअगाडीनै देखाइसकेको छ।
हाल तत्कालीन एसपी विष्ट र निलम्बित डीएसपी अंगुर जिसी फरार छन तर आज इन्सपेक्टर एकेन्द्र खड्का जगदिश भट्ट, सईहरु हरिसिंह धामी, रामसिंह धामी र प्रहरी जवान चाँदनी साउदको भने बयान शुरु हुनेछ। हाल कञ्चनपुर प्रहरीको हिरासतमा ६ जना छन्।
उनीहरुलाई अदालतमा बयान सकिएपछि थुनछेक बहस हुनेछ । त्यसपछि मात्रै धरौटीमा छोड्ने वा पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने भन्ने बारे निर्कुल हुने बुझिएको छ।
बर्षा देखि हिमपात सम्म पर्ने, मेघ गर्जन पनि, यस्तो छ तिन दिनको मौसम !
कोरियन भाषा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक !
शल्यक्रियामै लापरवाही हुँदा सुत्केरीको मृत्यु ,सडक अवरुद्ध
अनलाइनः विद्यार्थीलाई सफा पानीले आँखा धुन र बीसबीस मिनेटमा आराम लिन आग्रह
इन्सपेक्टरलाई घुस दिन खोज्दा चालक पक्राउ !